Banyere Wanyu | Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd.
Họrọ otu ihe na ndụ gị niile.
Gbado anya na imepụta ngwa ahịa karịa uru.
Hụnanya ịmepụta ngwaahịa nwere mkpụrụ obi.
Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd. na-etinyekarị ire ere nke akụrụngwa, na-elekwasị anya n'ịzụ ahịa akụrụngwa na-arụ ọrụ, gụnyere ọkụ na-arụ ọrụ, tebụl na-arụ ọrụ, na ihe mkpuchi ahụike. The dum akara nke ngwaahịa na-ere n'ụwa nile, na anyị nwere nanị gị n'ụlọnga mmekọ na ọtụtụ mba na Europe na America.
Na June 2003, ụlọ ọrụ ahụ tinyere aka na nguzobe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọkachamara na mmepe na mmepụta nke akụrụngwa ọgwụ maka ime ụlọ. Mgbe e guzobere ụlọ ọrụ ahụ, ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na teknụzụ na ndị ọrụ a zụrụ azụ ejirila obi ha niile ma gbakọta iji guzobe ma melite njikwa ụlọ ọrụ. Ugbu a, ngwaahịa anyị niile agafeela OA na asambodo ISO.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị emepela ọtụtụ tebụl na-arụ ọrụ, ọtụtụ usoro oriọna na-enweghị atụ, ihe mkpuchi ahụike, akwa akwa nkwanye ICU na ngwaahịa ngwaahịa ahụike ndị ọzọ. Ngwaahịa ndị a nọ n'ọkwá na-eduga na China ma nwee ike ibubata iji gboo mkpa dị iche iche nke ụlọ ọgwụ dị iche iche. A na-ere ya n'ụwa niile ma ndị ọrụ na-eto ya nke ọma.
Anyị bụghị nanị na-enwe ihe karịrị iri R&D injinia maka na-aga n'ihu R&D na ọhụrụ nke dị iche iche na ngwaahịa, ma na-enwe ogologo oge ekwenye mmekọrịta na ọtụtụ mahadum.
Anyị ngwọta gafere site na mba ọkà asambodo na e ọma natara anyị isi ụlọ ọrụ. Ndị otu ọkachamara ọkachamara anyị ga - adị njikere ijere gị ozi maka ịza ajụjụ na nzaghachi.